Mijanona amin'ny fampiasana /etc/rc.conf ny arabo hanamboarana ny rafitra | Avy amin'ny Linux
Mijanona amin'ny fampiasana /etc/rc.conf ny Arch mba hamboarina ny rafitra
Alf | | Fitsinjarana, About us
Satria tsy mpampiasa an'ity fizarana ity aho dia tsy haiko raha efa nampiharina io fiovana io na amin'ny ho avy, fa andao jerena izay hevitr'izy ireo.
Tamin'ny andro taloha, ny filozofia momba ny fitantanana ny rafitra ao ArchLinux nandrahoina amina fisie fikirakirana ankapobeny: ny /etc/rc.conf. Ity rakitra ity dia mirakitra ny fampahalalana rehetra momba ny fikirakira mba hiasa ny rafitra fototra, dia novaina:
Ny famantaranandro (na eo an-toerana na any amin'ny UTC, eo an-toerana dia hahena tsy ho ela)
Ny sarintany keyboard, ny endri-tsoratra console, ny sari-tanin'ny console
Ny toerana eo an-toerana (fiteny, faritra) izay namboarina ny rafitra
Ireo modely kernel izay naterina tamin'ny tanana
Fampiasana teknolojia fitehirizana toa ny RAID, rafitry ny rakitra BTRFS, LVM
Fanamafisana ny anaran'ny mpampiantrano
Fanitsiana ny (ip eo an-toerana na DHCP)
Ny DAEMONS na ny daemon rafitra hampidirina
Eny, izany rehetra izany dia tsy ho toy izany intsony. Ny fiovana lehibe manaraka dia manakaiky ArchLinux dia ny fampiatoana ny fampiasana an'ity rakitra afovoany ity ary hampiorina ireo faritra samihafa amin'ny rafitra ao anaty rakitra sy lahatahiry samihafa. Ary nahoana izany? ny valiny fohy dia ho an'ny systemd ny bootloader hafa amin'ny initscripts, satria ny systemd ankoatry ny fanoloana ny fitantanana boot dia manampy amin'ny fitantanana ilay rafitra ihany, ka mahatonga azy io, na dia toa hafa aza, dia mora kokoa ny mitantana ilay rafitra.
Toy izao ny fanaingoana:
Toerana taloha amin'ny /etc/rc.conf
Anaran'ny mpampiantrano / sns / hostname / sns / mpampiantrano tambajotra
Endritsoratra konsole sy sarintany fitendry /etc/vconsole.conf Localisation
Fikirana eo an-toerana /etc/locale.conf /etc/locale.gen Localisation
Faritra misy fotoana / sns / timezone / etc / localtime Localisation
Clock Hardware / sns / adiresy Localisation
Modely kernel /etc/modules-load.d/ Hardware
Daemons /etc/rc.conf DEMONONIA
Amin'ny ankapobeny ny /etc/rc.conf mijanona ho mpitantana DEMONONIA tsy misy zavatra hafa rehetra hosoloin'ireto rakitra fikirakirana ireto.
Ny naoty amin'ny fiteny tany am-boalohany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Mijanona amin'ny fampiasana /etc/rc.conf ny Arch mba hamboarina ny rafitra
Arch elite dia hoy izy:
Satria lasa tena be mpitia i Arch, dia hanasarotra zavatra kely ho an'ny mpampiasa izahay.
Valiny amin'ny elite Arch
Eny, azo antoka, izany no antony. ¬¬
Fampahalalana tsara ho antsika izay manomboka mampiasa Archlinux. Gaga aho rehefa nanitsy /etc/rc.conf ary tsy nisy ireo masontsivana izay tsy maintsy namboariko tao amin'ny torolàlana momba ny fametrahana ahy, tsy maintsy nojereko ny wiki ary averiko indray.
Wow, ankehitriny hanovana rakitra 9 hanaovana izay natao tamin'ny iray teo aloha. Malahelo ny malalako rc.conf aho. 🙁
Na dia mbola tsy mila malahelo azy aza aho satria mbola tsy nanandrana ny ISO vaovao ary amin'ny fametrahana ahy amin'izao fotoana izao dia mbola toy ny mahazatra ny rc.conf. 😀
Mianara manisa, adala, fisie 10 io.
Ary amin'izany fihetsika sy fanabeazana izany, mpiara-miasa amin'ny tranokala roa sy mpianatry ny GE ve ianao? Voafitaka ianao.
Miresaka amin'ny tenany izy ary tsy tsikaritro ny fihetsika manimba ...
Haha marina izany, naneso ny tenako fotsiny aho. 😀
Tiako kokoa ny hijanona ho iray ihany, fa raha tokony ... na izany aza, misy zavatra toa hafahafa amiko ... Raha toa ka misy daemon fotsiny ny rc.conf, maninona raha antsoina hoe daemons.conf na zavatra toa izany? Tsy misy dikany loatra ny fiantsoana hatrany ny rc.conf raha zavatra iray ihany no ampiasanao ...
Mba hisorohana ny fanovana ny fizotrany miantso ny rc.conf.
Aza sosotra, fa halako ny dika mitovy-Mametaka ny lahatsoratra ary vao mainka aza raha tsy mampiditra rohy amin'ilay lahatsoratra voalohany izy ireo: Na izany na tsy izany dika mitovy-Mametaka Tsy ara-drariny na mampiditra ny rohy, fa farafaharatsiny mba omentsika voninahitra izay mendrika azy: http://www.rafaelrojas.net/2012/07/27/adios-al-etcrc-conf/
Inona ny olana, tsy azoko? Ny tanjona dia tsy ny fampifanarahana ny lahatsoratra na zavatra hafa toa izany, raha toa Rafael Rojas mahatsiaro voatonona amin'ilay "Kopia / Mametaka" nolazainy taminay ary amin'izao fotoana hanovantsika ny fanontana na esorinay ilay lahatsoratra. Ary koa, amiko dia toa misy rohy (izay ilay hitan'i Alf) tao amin'ilay lahatsoratra ary ity dia manana rohy hafa amin'ilay tranonkala nolazainao ..
Raha toa Rafael Rojas mahatsiaro ho tafintohina amin'ny fomba rehetra, sosotra, na misy karazana tsy fitovian-kevitra, azafady mba ampahafantaro anay ary handray ny fepetra mifanaraka amin'izany izahay.
Rafael Rojas dia hoy izy:
Tsia, tsy sosotra aho 😀
Na izany aza, ny rohy amin'ilay lahatsoratra nataonao dia mampifandray ny bilaogiko.
Raha maka fampahalalana mivantana avy amin'ny bilaogiko ianao dia tsy misy olana, fankasitrahana ny rohy mankany amin'ny bilaogy, tsy voatery, fa fahalalam-pomba fotsiny.
Valiny tamin'i Rafael Rojas
Efa nalamiko ireo rakitra ireo. Saingy mbola tsy afaka manapa-kevitra ny hamafa ilay rc.conf taloha aho. Satria fampahalalana fanampiny ao amin'ny forum dia nisy kofehy mahaliana iray nosokafana tamin'ity lohahevitra ity.
Tsy tiako ity bitika iray ity, mazava ho azy ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba ny Arch dia ny hoe, tao anaty rakitra iray dia namboariko ny zava-drehetra na saika ny zava-drehetra ... tsia, tsy tiako io fanovana io.
Saingy tsy resaka Arch, fa hoy ny lahatsoratra, ny systemd. Ary efa fantatsika fa tia miasa ny Arch satria ny rindrambaiko voalohany dia noforonina.
Saingy tsy manasarotra zavatra sy fifanoherana amin'ireo KISS natao sampy io? xD
Andro vitsivitsy lasa izay dia nametraka Arch Linux tao amin'ny VB aho niaraka tamin'ny iso vaovao manaraka ny torolalan'ny namesake-ko @gespadas ary mety ho tsara ho ahy io 🙂
Vaovao tsara 😉
Tsy ao ity fampahalalana ity hamenoana ny tutorial, tokony, @gespadas ao amin'ny mpitari-dalana anao ianao, mampifandray amin'ity lahatsoratra ity mba ho torolàlana feno araka izay tratra. 🙂
Fantatro fa tsy azo ihodivirana ity dingana ity satria ilaina amin'ny fampiharana ny systemd, saingy mamela tsiro mangidy eo am-bavako satria very ny halehiben'ny Arch rehefa manamboatra azy, avy amin'ny rakitra afovoany /etc/rc.conf. Mazava ho azy fa tsy hoe /etc/rc.conf/ fotsiny i Arch fa ampahany lehibe amin'ny toetrany ity rakitra ity ...
Bye bye /etc/rc.conf, malahelo anao izahay!
ieje dia hoy izy:
Saingy araka ny vaovao ao amin'ny pejy ofisialy: http://www.archlinux.org/news/changes-to-rcconf-and-crypttab/
"Ny format taloha dia mbola anohana, ka ny rakitra config taloha dia tokony mbola hiasa tsy miova."
ka amin'izao fotoana izao dia tsy dia manelingelina ahy loatra izany.
Mamaly an'i ieje
Ity fanamarihana ity dia nomena tamin'ny toerana 3 farafahakeliny, noho izany dia tsy maintsy miampanga ny rehetra isika, miandry valiny avy amin'i Rafael koa aho, raha miteny izy fa tokony ovaina ny endrika na ny atiny satria vita na voafafa ny kofehy ary dia izay, ao koa ny rohy izay nasiako resaka dia natao tao amin'ny bilaogin'i Rafael.
Zavatra iray hafa, mahazo alalana amin'ny olon-kafa hizara vaovao amin'ny bilaoginy aho, ary araka ny nolazain'izy ireo tamiko, "Tsy miraharaha ny fananana trosa aho, ny zava-dehibe amiko dia ny fanaparitahana ny fahalalana."
Amena ………… misy mpanoratra be fialonana amin'ny atiny
Angamba ny manahirana ny olona mivantana dia ny hoe copy-paste ilay lahatsoratra. Lahatsoratra maro vita ao amin'ny DesdeLinux no "copypasted" ahy, indrindra ireo an'ny Steam, ary eny, napetrak'izy ireo ny loharano saingy mitovy tanteraka amin'ireo soratako ireo. Tsy zavatra mahatezitra ahy na ivelan'ny boaty misy ahy izany, fa farafaharatsiny manana fahazarana mametraka ny loharano amin'ny fiandohan'ny lahatsoratra aho, miaraka amin'ny hevitro manokana ary amin'ny farany koa, mba hanazavana fotsiny fa ilay lahatsoratra dia tsy ahy tanteraka. Noho izany, manampy zavatra foana amin'ireo re-post ataoko aho.
Ehm, io ihany no zavatra tsara sisa tavela tamin'ny archlinux, ankehitriny raha 100% ny crap, ary ny iray ihany izay mbola fomba BSD ao amin'ny script-ny, dia izy irery no tsy nanahaka mihitsy, Gentoo!
Valio ny synflag
Ka ny rakitra config fotsiny ve no tsara ho an'ny Arch? Tsy Arch izany!, Jereo ny Wiki-raha hahitana hoe iza izy. Ary rahoviana, tsy i Gentoo irery no manana fanombohana BSD, misy ny distro tranainy indrindra izay Slackware.
Rain dia hoy izy:
Puff tamin'ity no nanodinkodinany ahy mafy, hanomana ny fifindrako any amin'ny Fedora na ubuntu aho, mampalahelo fa manova ny iray amin'ireo teboka tsara indrindra aminy ny andohalambo.
Valiny amin'i Rain
Raha efa manana Arch napetraka ianao, maninona no manova? Zavatra tsy misy fiatraikany mivantana aminao izany raha tsy mamerina mametraka azy indray ianao. Etsy andanin'izany, tsy hanisy ratsy ny rafitra fiasa izany, aza manaitaitra be xD
Hafahafa tokoa ny safidinao dia ny Fedora sy Ubuntu, distros misy tanjona samy hafa tanteraka noho ny Arch. Mazava fa tsy ny Arch no notadiavinao.
Marihiko fa azo antoka fa handray an'io fepetra io ihany koa ny tetikasa chakra ato ho ato ary ho havaozina aho 😀 ao amin'ny forum chakra hoy izy betsaka momba ny systemd sy ireo tombontsoa lehibe entin'izany. Tsy manahy koa aho fa ny bilaogy tsara momba ny linux dia hitondra torolàlana tsara ary raha tsy azo antoka ny wiki wiki.
Ny fanovana ny systemD dia tsy maintsy atao, tsy ho ela dia hiankinan'ny kernel satria natambatra ny systemd sy udev, napetraka ao anaty rakitrao ny systemd ary ny fanatsarana ny hafainganam-pandeha ihany no mendrika ny fanovana.
Raha te-ho vaovao ianao amin'ny zavatra rehetra tokony hampifanarahana ny fanovana ilaina amin'izany. Ny fizarana hafa dia tsy mampiova izany satria miadana kokoa ny fanavaozana azy ireo. Heveriko fa izany no teboka ratsy indrindra an'ny Arch, ny tsy maintsy hahalala tsy tapaka ny fanovana vaovao ao amin'ny rafitra. Famotsorana Rolling !! namana…
Ny tena marina, inona ho an'ny sasany dia ratsy ho an'ny hafa fa tsy ny sasany, ny sasany mahatsapa fanaraha-maso bebe kokoa ny rafitra, ny hafa mety hahatsapa fa sarotra kokoa izany.
Raha mahatadidy, ohatra, KZKG ^ Gaara (satria mety misy tranga maro kokoa), dia tsy nahomby ny andohalambo ary tsy nisy fomba hanamboarana ny simba, tao anaty masinina fiasana iray izay tsy azonao atao ny mandany fotoana mitady ny vahaolana.
Tsy miteny aho hoe ratsy ny andohalambo, milaza fotsiny aho fa samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay.
Windows 8 dia tokony hivoaka amin'ny volana oktobra